अमेरिकी राजदुत भन्छन् -अमेरिकाले नेपाललाई रु. ३८ हजार करोड सहयोग गरिसकेको छ – Halkhabar kura
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:०२
अमेरिकी राजदुत भन्छन् -अमेरिकाले नेपाललाई रु. ३८ हजार करोड सहयोग गरिसकेको छ
यसकारण नेपालमा सैन्य अखडा राख्न चाहँदैन अमेरिका
हामी चाहँदैनौँ नेपाल अमेरिकामा निर्भर होस्। नेपाल अरु कुनै पनि मुलुकसँग निर्भर होस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ। ७३ वर्षदेखि अमेरिका नेपालमा काम गरिरहेको छ। यो अवधिमा हामीले नेपालको विकासका लागि ३.३ अर्ब डलर दिइसकेका छौँ। त्यो ३८ हजार करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी हो। तैपनि हामीले नेपाललाई अमेरिकापरस्त हुन वा अमेरिकी गठबन्धनमा प्रवेश गर्न भनेका छैनौँ। हामीले सधैँ भनेका छौँ– नेपाल आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नेपालपरस्त हुनुपर्छ।
(नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरुलाई १८ फेब्रुअरी २०२१ मा दिएको सम्भाषणको अनुवाद)
Previous सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न ‘अफरै अफरै’ !
Next साम्राज्ञीको हटपोजहरु (फोटो फिचर)